Ka Faa'idayso Wakhtigaaga! - Qalinkii Muxammed
Qormadan waxaan rabaa inaan kugu yara xasuusiyo muhiimada uu leeyahay wakhtigu.
Wakhtigu waxaa uu leeyahay muhiimad aad u wayn, hadaynu maanta ognahay qiimaha uu leeyahay halka daqiiqo, marnaba ku maynaan lumineen wax aan u qalmin. Nasiib daro waxaad maanta arkaysaa dhalinyaro soomaali ah oo badan oo le, halkeen wakhti ku luminaa? Lagasoo bilaabo Maalintaynu dhalanay waxaynu bilawnay inaynu geeriyoono, daqiiqadi ina dhaaftaba waxaa dhimata qayb ka mid ah jidhkeena oo aan dib usoo noqonayn, sidaasna waynu ku soconaynaa illaa intay inaga baxayso naftu.
Waxaa aad u fiican inaynaan wakhtigeena qaaliga ah ee aynu haysano iska lumin, lacag way kusoo gashaa wayna kaa tagtaa, caafimaadku wuu tagaa wuuna soo noqdaa, dadku way tagaan waanay soo noqdaan laakiin wakhtigu hadii uu mar tago waa waxa kali ah ee aan soo noqoshada lahayn!
Micnahaygu waxa weeye hal daqiiqo gudeheed waxaa kugu soo dhici karta fikrad aad qaali u ah, oo noloshaada dhamaanteed badasha, hal daqiiqo gudaheed waxaad guclayn kartaa dhawr talaabo ( oo kaa riday baruur aanad ogayn), hal daqiiqo gudaheed waxaad u sheegan kartaa qof aad jeclayd jacaylkaaga oo noloshaadii oo dhan ayaa isbadali karta IWM.
Halka daqiiqo waxyaabaha aad ku qabsan karto way badanyihiin isagoo waliba hadana aad u yar, dadku badanaase ma oga, rabi waa uu ku waydiin doonaa maalinta qiyaame waxaad wakhtigaagii kusoo qabatay ee jawaab ma u haysaa?!
Dadkeena waxaa badanaa ka reebay qayrkood, ma fahansana qaarkood muhiimada uu leeyahay wakhtigu, dhalinyaro wakhti badan qaylaya iyo kuwo kale oo video games ciyaaraya. Qalad maaha inaad samayso waxay naftaadu jeceshahay laakiin waxaa qalad ah inaad naftaada u noqoto adoon markasta ogol waxay rabto oo ay indhoole ka dhigtay. Aabo diric ahaa ayaa isagoo wiilkiisa la dardaarmaya ku yidhi “Aabo waligay ma’arag cadaw igaga xun naftayda” wuxuu u jeedaa inay naftu markasta dantaada waxay isku dayaysaa inay ku seejiso, wakhtigaaga qaaliga ahna jeceshahay inay ku lumiso wax aan faa’iido kuu lahayn.
Maalinkasta oo timaadaa way hadashaa waxa tidhaahdaa Hebeloow/Heblaayooy waykan ee iga faa’idayso, wax badan waad qabsan kartaa ee hay dayicin! saacad kasti way hadashaa iyadoo le Hebeloow/Heblaayooy iga faa’idayso, hadaan imika ku dhaafo markale soo noqon maayee! Daqiiqad kasti way hadashaa iyadoo le Hebeloow/Heblaayooy Hadaad sifiican ii isticmaasho faa’iido badan ayaad helaysaa ee hay dayicin! wakhtigu sidaasuu kuula hadlayaa maalin kasta adigaanay ku jirtaa Jawaabtaad siin lahayd. Laba ayuunbay noqonaysaa Adigoo codadkaas sifiican ugu jawaaba ama Adigoo dayaca!
Qofkasti waxa uu leeyahay waa 1440 Daqiiqo maalin kasta, waxaad ku bixisana midhaheeda ayuunbaad guranaysaa, hadaad ka faa’idaysan waydo wakhtiga, wakhtiga laftiisa ayaa adiga kugu noqonaya mid qadhaadh! siday carabtu ku maahmaahdo “Wakhtigu waa Seef hadii aad jari waydo isagaa ku jaraya!” waad awoodaa inaad naftaada ka adkaato, ee isku day oo wakhtigaaga marnaba ha dayicin.
Sida loo yidhaa “Maya” Baro fadlan, waxaa jira dad badan oo wakhtigaaga raba inay lumiyaan waa inaad awood u leedahay inad tidhaa MAYA, oo aad wakhtigaaga wax fiican ku bixisaa. Isku day inaad wax barato maalinkasta, isku day inaad shaqaysato, isku day inaad riyooyinka aad leedahay ka dhigto kuwo rumooba, isku day inaad naftaada wax ka badasho, waxaasoo dhani waxay suurto galayaan kaliya markaad wakhtigaaga ka faa’idaysato.
Is xisaabi Habeenkii intaanad seexan oo naftaada waydii maxaad maanta soo qabsatay, marna yaanay 1440 daqiiqo eed haysataa si kaftan ah kaaga bixin, Ahoow qof soo jeeda…